यी ३ बकवास चलचित्र सम्झन पनि चाहँदैनन् शहिद कपूर ! – Jagaran Nepal
यी ३ बकवास चलचित्र सम्झन पनि चाहँदैनन् शहिद कपूर !
एजेन्सी – ‘चकलेट लुक्स’ को कारण युवतीहरुको नजरमा पर्ने गरेका नायक शाहिद कपूर बलिउडमा प्रवेश गरेको धेरै भैसक्यो।लुक्स मात्र नभई नृत्य र अभिनयको कारण पनि शाहिद चर्चामा हुने गर्छ। एकै प्रकारको भन्दा पनि फरक-फरक भूमिका निभाउन रुचाउने शाहिदको बलिउड यात्रा हाल सम्म मिश्रित रहिआएको छ। उनले फ्लप र हिट दुवै चलचित्रहरु दिएका छन्।
हैदर, कमीने, उडता पंजाब र पद्मावत जस्ता चलचित्रमा उनले गरेको अभिनयले सर्वत्र चर्चा पायो। यी चलचित्र हिट पनि भए। तर शहिद आफूले काम गरेका केहि चलचित्र भूल्न चाहन्छन्। शहिदलाई निम्न उन्ल्लेखित चलचित्रलाई लिएर अफसोस हुने गरेको छ।
पूरै फ्लप भएको चलचित्र शानदारलाई शहिद भुल्न चाहन्छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा शहिदले यस चलचित्रलाई आफ्नो जीवनको सबै भन्दा खराब चलचित्रको करार दिएका थिए।
सन् २००६ मा आएको यो चलचित्रलाई पनि शहिद भुल्न चाहन्छन्। यस चलचित्रमा शाहिदले बोल्न नसक्ने नाटक गरेको देखाइएको थियो। परेश रावल र राजपाल यादवको कमेडीले चलचित्रका नायक शाहिदलाई नै ओझेलमा परेको थियो। चलचित्रमा नायकको रुपमा उनी भएता पनि उनले खासै अभिनय कला भने देखाउन पाएनन्। सायद यहि भएर होला उनी यसलाई भुल्न चाहन्छन्।
यस चलचित्रमा शहिदले एक मृत आत्माको भूमिका निभाएका थिए। चलचित्रमा राम्रो कमप्यूटर ग्राफिक्स प्रयोग नभएको हुँदा चलचित्र बकवास सावित भयो। यहि कारणले गर्दा शहिद यस चलचित्रलाई पनि भूल्न चाहन्छन्।